अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर यसलाई भित्र काम गर्दछ कि कुनै पनि अन्य अनुप्रयोग रूपमा मानिन्छ। यो यसको स्थिति र महत्त्व बढ्छ, त्यसैले विकासकर्ताहरूले दक्षता र अनुकूलन गर्न धेरै ध्यान। संचालन प्रणाली छ - "फलाम" र प्रयोगकर्ता बीच भर्चुअल पत्र छ।
यो, तपाईं विशिष्ट कार्यहरू सिर्जना गर्न र उद्देश्य पहिचान गर्न सक्छन् सञ्चालन प्रणाली। प्रयोगकर्ता जो तपाईंलाई विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्दैन काम गर्न कार्यात्मक उपकरण आवश्यक छ। यस मामला मा ओएस छैन त्यसैले एक मंच तिनीहरूले पूर्णतया प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा रूपमा उपकरण द्वारा धेरै छ।
पनि आफ्नो परिचय को पहिलो व्यक्तिगत कम्प्युटर मुख्य समस्या सिर्जना को सुरुतिर मा मात्र होइन उच्च लागत, तर पनि काम को जटिलता थियो। वास्तवमा, यस्तो कम्प्युटर बस प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस, त्यसैले विशेषज्ञहरु तयार गर्न आवश्यक काम, र "व्यक्तिगत कम्प्युटर" को अवधारणा यो विपरीत छैन। त्यसैले, उद्देश्य सञ्चालन थप स्पष्ट सिस्टम हुन्छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसको सान्दर्भिकता।
यो अपरेटिङ सिस्टम लागि सामान्य आवश्यकताहरु तैयार गर्न सम्भव छ। सञ्चालन प्रणाली को मुख्य उद्देश्य कम्प्युटर स्रोतको कुशल उपयोग सुधार छ, र यो विशेष उपकरण र सुविधाहरू आवश्यक छ। किनभने यो तपाईं एक साथ कार्य को जटिलता वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ उपलब्ध स्रोतहरूको तर्कसंगत प्रयोग, प्रभावकारी काम को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
साथै, सञ्चालन प्रणाली पारंपरिक छ कि काम प्रक्रियाहरू र कम्प्युटर को राज्य झल्काउँछ भर्चुअल स्पेस सिर्जना गर्छ। यो प्रयोगकर्ता को सुविधाको लागि गरिन्छ। वास्तविक हार्डवेयर मोडेल अवस्था सफ्टवेयर outputted। कारण यो अन्तरक्रिया गर्न मिसिन र प्रयोगकर्ता बीच स्थापित भइरहेको।
हामी वर्तमान प्रणाली विचार भने, तिनीहरूले मात्र काम को लागि उपकरण प्रदान गर्नुपर्छ, तर पनि उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न। विकल्प मध्ये एक - अनुकूलन छ र माथि उल्लेख गरिएको थियो जो स्रोत खपत, को दक्षता वृद्धि। सञ्चालन प्रणाली को उद्देश्य आवेदन र कार्यक्रम को एक किसिम प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक व्यापक वातावरण प्रदान गर्न, र जानकारी यसबाहेक, कम्प्युटर आफू र उपकरण प्रत्येक अन्य अन्तरक्रिया गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अर्को एउटा कम्प्युटर बाट हस्तान्तरण गरिनेछ।
अपरेटिङ सिस्टम को विविधता
संसारमा वर्तमान क्षणमा सञ्चालन प्रणाली को धेरै प्रकार छन्। यस्तो विविधता विभिन्न उद्देश्य र कार्यहरु को विकासकर्ताले सेट द्वारा बताए छ। साथै, प्रत्येक सञ्चालन प्रणाली, नियम, जो एक लामो समय को लागि विकास गरिएको छ एक विशेष परिवार, केही प्रकारको हौं।
क्षणमा प्रमुख सञ्चालन प्रणाली छ एक Windows र Linux, तिनीहरूले अक्सर पीसी मा पाइन्छन्। पनि लायक एप्पल गरेको कम्प्युटर मा प्रयोग MacOS, टिप्पण।
हालैका वर्षहरूमा, मोबाइल उपकरणहरूको विकास आफ्नो क्षमता संग र वृद्धि मोबाइल प्लेटफर्ममा थप लोकप्रिय र सान्दर्भिक आजको प्रयोगकर्ताहरूलाई हुँदै गइरहेका छन्। तिनीहरूले परम्परागत ओएस भन्दा कुनै कम ध्यान र विकासकर्ताहरूले तिनीहरूलाई लागि सफ्टवेयर सिर्जना गर्नुहोस्।
केही हदसम्म यो स्तरीकरण र लामो माइक्रोसफ्ट एकाधिकार को कमजोर भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ प्रयोगकर्ता बजार मा एक भन्दा बढी प्रजाति प्रयोग गर्न थालेका छन् कि। दोस्रो अपरेटिङ सिस्टम - यो अक्सर एक बाध्य आवश्यकता, तिनीहरूको डेटा, साथै सबै उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर आफ्नो काम अनुकूलन गर्न तरिका रक्षा गर्ने प्रयास हो।
कसरी विन्डोज आफ्नो कम्प्युटर बन्द गर्न
प्रणाली मात्रा सूचना - यो के हो? आधारभूत अवधारणाहरु
पोत को स्थिति निर्धारण। पोत को संकल्प: तरिका
जालसाजी। अपराधी कोड को लेख 327। व्यवस्था सिक्ने
प्रभावकारी दर: अवधारणा र उद्देश्य
के शब्द "ट्रोजन घोडा" अर्थ?
यो श्रृंखला "बदलयो": अभिनेता, वर्णन, समीक्षा
आरामदायक आँगन: यो के हो?